प्रदेश तीनका नागरिकले कति कमाउँछन्, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशका मानिसले कति कमाउँछन् ? - Khabar Break | Khabar Break
प्रदेश तीनका नागरिकले कति कमाउँछन्, हेर्नुहोस् कुन प्रदेशका मानिसले कति कमाउँछन् ?
सात प्रदेश विभाजन गरिएको नेपालको नक्सा
३० जेठ,प्रदेश नम्बर तीनका व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यस प्रदेशका एक व्यक्तिले वार्षिक १५ सय ३४ डलर कमाउँछन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान प्रदेश नम्बर ३ को रहेको छ ।
प्रदेशगत अर्थतन्त्रको आकारमा निकै ठूलो भिन्नता देखिएको छ ।प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक हैसियत अन्यको तुलनामा निकै सबल छ । देशको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ३१।९ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९५ अर्ब ९३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर एकको जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय दोस्रो बढी देखिएको छ । प्रदेश नम्बर एकको एक व्यक्तिको आम्दानी एक हजार २४ डलर रहेको राष्ट्र बैंकले भनेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यो प्रदेशको योगदान १७।५ प्रतिशत छ । यसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ५२ अर्ब ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश नम्बर २ को १६।२ प्रतिशत हिस्सा छ ।
३१ अर्ब ५७ करोड १६ लाख रुपैयाँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन रहेको प्रदेश ४ को प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २१ डलर रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशको योगदान भने १०।५ प्रतिशत रहेको छ ।
संख्यागत रुपमा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी गरीबी र प्रदेश १ मा सबैभन्दा कम गरीबी रहेको छ । बहुआयामिक गरीबीको दर अनुसार प्रदेश नम्बर २ सबैभन्दा बढी गरिबी र ४ सबैभन्दा कम गरीबी रहेको छ । रातोपाटी बाट